Usapfeke 'maski asiri iwo' muchitima cheEurostar!
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » France Kuputsa Nhau » Usapfeke 'maski asiri iwo' muchitima cheEurostar!
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • France Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Rail Kufamba • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Mapurisa eFrance anobvisa mutyairi weBritish asingadzoreki akapfeka 'mask yemhando' kubva muchitima cheEurostar, vamusunge, mushure mekumira kwechimbichimbi muLille.
Chitima cheEurostar chakamanikidzwa kumisa chimbichimbi muLille, France pamusoro pevasingateereri.
Mutyairi wechitima cheBritish abviswa muchitima, akasungwa mushure mekutarisana nemaneja wechitima cheEurostar.
Mufambi uyu akaita hasha nekutyisidzira akananga kuchikwata chebhodhi, saka mapurisa akasheedzwa.
Mapurisa ane zvombo akamanikidza mumwe mutyairi akapomerwa kupfeka 'mask yemhando' kubva muchitima cheEurostar mushure mekunge yamira nechimbichimbi muLille, France neChina manheru.
The Chitima cheEurostar aifamba kubva kuParis Gare du Nord achienda kuSt. Pancras neChina masikati asi akamanikidzwa kumira nechimbichimbi muLille mushure mekunge maneja wechitima anonzi apinda munharo huru nemufambi weBritish kubva Liverpool pamusoro pechiso chake chemask, zvinoenderana nevanodzidzisa vatyairi.
Kutevera kunetsana, maneja akataura kuti vachange vachizivisa mapurisa kuLille kukundikana kwake kutevedzera mirau yeCOVID-19, nechitima chichiita chimbi-chimbi, chiteshi chisina kumira pachiteshi apo mapurisa masere akamanikidza mutakurwi.
Paakasiya chitima, Brit, anofungidzirwa kuve mumakore ake makumi mana, akataura kuti akapomedzerwa "asina kupfeka chimiro chakakodzera chemask" uye iye zvino "achasiiwa ari oga muFrance," achiidaidza "hutsinye hwakanyanya."
Mutauriri we Eurostar akadzivirira mhinduro kumamiriro ezvinhu, achiti "mufambi uyu akaita zvehasha nekutyisidzira kune vebhodhi timu" mushure mekunge vamuyeuchidza nezvekutonga kwavo pamask kupfeka uye, semhedzisiro, iye "akanzi asiye chitima pachiteshi cheLille . ” Zvinoenderana ne "maitiro akajairwa" ekambani mapurisa akadaidzwa "kuenda uye kubatsira."
Mapurisa eFrance akasimbisa murume uyu kuti akasungwa pamusoro pechiitiko pachitima asi haana kupa zvimwezve mamiriro acho ezvinhu.
Eurostar inoti pawebhusaiti yayo kuti vese vanofamba vanofanirwa kupfeka chifukidziro kumeso pazvitima zvavo, kunyangwe kana vakabayiwa jekiseni zvizere, neavo vanokundikana kutevedzera kufamba kunorambidzwa. Nhungamiro dzekambani hadzitaure kuti ndeipi mhando yemask inodiwa, chete kuti inofanirwa kuvhara muromo nemhino dzevatakurwi.
UK yekufambisa basa rekucheka inopa kuwedzera kutsva kumhepo yemumba ...
Mafemu ekufambisa anoshandisa tekinoroji kuita zvakanyanya ...
Facebook yakafa, rarama kwenguva refu Meta!